PNUD: Miady amin’ny fanadiovana omby halatra | NewsMada
PNUD: Miady amin’ny fanadiovana omby halatra
Hisorohana ny fanadiovana omby halatra any amin’ny faritra Atsimo, nanafatra fitaovana informatika ny Pnud ho an’ny distrikan’Ihosy, Betroka, Amboasary Atsimo, Bekily. Ny antony, tsy afa-bela amin’ity famotsiana omby halatra amin’ny FIB ity ny tantsaha. Nankatoavin’ny filankevitry ny minisitra, ny 12 janoary 2022, ny hetra sy haba nanafarana ireo fitaovana ireo, ankoatra ireo entana hafa, toy ny masomboly ampemba anatin’ny tetikasa Mionjo, nafaran’ny FAO.
600 hatramin’ny 700 isan’andro ny omby vonoina eto Antananarivo sy manodidina, ary betsaka amin’ireo omby halatra, izay jifaina eto Antananarivo. Tamin’ny 2011, 2012 nandeha teto ny fanondranana omby, nisy tao Vontovorona, Ambatolampikely, Ihosy.
Maninona anefa no mirongatra foana ny halatr’omby eto amintsika ? Satria misy foana ny famotsiana omby halatra amin’ny taratasy. Na ny FIB aza tsy mitovy ny vola aloa any amin’ny faritra Atsimo. 50 000 hatramin’ny 30 000 Ar vao mahavita taratasin’omby iray.